Ride Koowheel Electric skateboard handeha na aiza na aiza - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Ao amin'ny fifadian-kanina ny fiainana ankehitriny, fa ny ankamaroan'ny fotsy vozon'akanjoko, asa ivelan'ny trano dia tsara amin'ny faran'ny herinandro mahafinaritra. Ireto avy ny fanontaniana hoe: ahoana no mahazo any amin'ny toerana nanaiky? KOOWHEEL Electric skateboard dia ho safidy tsara dia tsara ho an'ireo tanora lamaody ankizilahy sy ankizivavy. Izany dia midika fa tsy tokony ho niaritra amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny fanaovana tanàna fiara fitateram-bahoaka, na dia lavitra ny metro feno olona. ireo tanora mankahala izany. Raha misafidy ny skateboard scooter, dia afaka mahazo ny faran'ny herinandro mahafinaritra ary manao izay zavatra mahaliana anao ao. Toy ny mananika, Play badminton na dia Haka frezy. Tsy vitan'ny hoe Tia ny faran'ny herinandro sambatra kokoa fa ny fifandraisana amin'ny namana. Noho izany, Ride Koowheel Electric skateboard dia ho safidy mety tsara. Nahoana no hifidy Koowheel E-skateboard ?
Voalohany indrindra, dia ny tena takatry ny herinaratra skateboard miaraka amin'ny entana mora replaceable bateria. Efa natao tamin'ny brushless irery ihany, fiaviana roa in-kodia Hub Motors,Bluetooth Wireless lavitra fanaraha-maso sy 7 sosona ny mateza Canadian Maple ny manovaova. Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia 40km / h, ary mankafy ny fahafahana handeha na aiza na aiza ao amin'ny tanàna misafidy tsy guzzling mandatsa-dranomaso, na tsemboka avy rehetra nandeha na mitaingina bisikileta. Ianao na dia mety nataony teo anaty kitapo ka ento ho any na aiza na aiza, dia aoka ihany asa ivelan'ny trano na trano kafe.
Ny Koowheel herinaratra skateboard noforonina ny eritreritra tsotra fa ny olona rehetra dia tokony ho afaka hankafy ny tsy hanahirana izay mahatonga teknolojia. Tsy mety raha ny herinaratra skateboard fotsiny kilalao vitsivitsy geeks. Amin'ny hoavy, dia ho vaovao be Anarana iombonana amin'ny teny fitaterana. Tena misy hery-fiara fahavaratra. Azo antoka fa vaovao fotoana fohy safidy ho an'ny commuting, mandeha any an-dakilasy, ny fivarotana lehibe sy ny manodidina sy mahazo mandeha miantsena? Inona no mety ho tsara kokoa noho ny hoe afaka mandeha malalaka manodidina ny tanàna? Mora kokoa ny mitaingina noho ny tsy tapaka skateboard. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fanaraha-maso lavitra rehetra, tsy maintsy atao dia ny hitsangana eo amin'ny solaitrabe ary mankafy ny diany.